Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare iyo madaxweynaha Puntland oo ka wadda-hadlay arrimaha doorashooyinka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare BFS Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa maanta Muqdishu kulan kula qaatay madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo magaalada u jooga ka qeyb-galka shirka arrimaha doorashooyinka.
Labada mudane ayaa ka wada hadlay xaaladaha guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa dhowaan sheegay in siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobolada Waqooyi aan laga qeyb-gelinin shirarka ku saabsan aarrimaha doorashooyinka.
Dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed, ayaa magaalada Muqdishu kula kulmay madaxweynayaasha Maamulada Jubbaland iyo Puntland.
kulanka ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka ka taagan, sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga soo saaray kulankaas.
Madaxweynaha Galmudug oo maanta la kulmay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan